Vaovao - Fomba fisafidianana sy fitandremana an'i Easel
Voalohany, misafidy amin'ny vanim-potoana fampiasana.
Tsy takiana ny hanana fiainana serivisy lava ampiasaina amin'ny fotoana fohy. Ohatra, tsy mety ho an'ny mpianatra ny mividy savily ary miala rehefa vita ny fianarany. Ireo orinasan-doka dia mampiseho ny toerana iray ihany, indraindray indray mandeha ihany. Avy eo mampiasa fomba maivana sy tsotra toy ny kesika. Tsy mila mavesatra loatra izany. Tena mora vidy.
Raha te hampiasa azy io mandritra ny fotoana lava ianao, na azonao alefa amin'ireo zandrinao lahy sy vavy amin'ny kilasy manaraka aorian'ny fampiasana azy dia azonao atao ny mividy Wood Easel isan-karazany mafy toy ny beech sy elm, izay mafy orina kokoa ary misy androm-piainana maharitra.
Faharoa, misafidy amin'ireo fiasa ampiasaina.
Ny zana-kazo amin'ny ankapobeny dia zana-kazo fanohanana miverina telo ranjo. Ny orinasanay koa dia manana zana-kazo efatra misy vatasarihana, izay mora ihany koa ary azo ampiasaina amin'ny famoronana sary.
Mila miroso ny fandokoana menaka. Amin'ny ankapobeny dia manana chassis somary malalaka izy ary misy kodiarana manerantany; Na izany aza, misy ihany koa maodely iray izay afaka mirona any amin'ireo zana-tohotra telo misy ranjo any aoriana, izay mora indrindra amin'ny farany ambany ambany izay azo ampiasaina amin'ny sary sy sary hosodoko menaka;
Ny sary hosodoko sy hosodoko sinoa nentin-drazana dia mila talantalana azo apetraka. Indray mandeha izahay dia nanana mpampiasa sary hosodoko sinoa nentim-paharazana izay tsy mila hapetraka. Tsy dia mahazo aina loatra ny hazondamosin'ny tranon-jaza ary tsy afaka miondrika ny lohany noho ny hoso-doko lava izy, ka nisafidy talantalana hoso-doko solitany hisarihana sary hosodoko sinoa nentim-paharazana.
Ankoatr'izay, safidio ny tontolo iainana ampiasainao.
Ny ankamaroan'ny talantalana anaty trano dia lava, mavesatra ary milamina. Izy ireo dia manana kodiarana manerantany amin'ny ankapobeny mba hitazonana fihetsiketsehana anaty trano kely; Ny ankamaroan'ny talantalana ampiasaina amin'ny fanaovana sary an-kalamanjana dia misy vokany mivalona tsara. Taloha, ny ankamaroan'izy ireo dia nampiasa boaty hosodoko, ao anatin'izany ny loko hosodoko sy ny toner. Nisy ny mpiserasera sasany nilaza fa tsy manana talantalana tsara ny watercolor rehefa mivoaka, ary avy eo manidy ny fonon'ny boaty hosodoko ary manoritra eo amin'ny fonony. Na izany aza, izao dia misy ny zana-pandehanana matihanina maro samihafa amin'ny fanaovana sary an-kalamanjana. Ny vokany mivalona dia tena tsara, ao anatin'izany ny hosodoko sinoa nentin-drazana, hosodoko ary saripika, azo ampiasaina ny hosodoko solika.